प्रस्तोतालाई मेनुकाको प्रश्न 'हिरोनी फिलिङ्समा थिएन?', प्रपन्चमा उनको एक्सन अवतार - www.dthreeonline.com
प्रस्तोतालाई मेनुकाको प्रश्न ‘हिरोनी फिलिङ्समा थिएन?’, प्रपन्चमा उनको एक्सन अवतार
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १४, २०७८ समय: १०:०२:३२
इटहरी/ भोजपुरी तथा मैथिली म्युजिक भिडियोमा लोकप्रिय बनेकी मेनुका माझी यतिबेला नेपाली म्युजिक भिडियोमा समेत छाउदै छिन् । भोजपुरी र मैथिलीमा उनले अभिनय गरेको दर्जनौं गीत मात्रै छैन हिट समेत छन् । मोडलबाट अब मेनुका लोकप्रिय अभिनेत्री बन्ने सुरमा समेत छिन् । उनले ५ ओटा नेपाली चलचित्रमा अभिनय समेत गरेकी छन् । तर, अभिनेत्रीमा भने खासै उनकको चर्चा देखिदैन । कारण, उनी चलचित्रमा प्रमुख भुमिकामा नभएर पनि हुन सक्छ ।
उनले खेलेको पछिल्लो चलचित्र ‘बिहे पास’ भने रिलिज भएको छैन । जसमा उनी कलाकार बुद्धि तामाङको श्रीमती भएर अभिनय गरेकी छन् । बिहे पासबाट भने केही अपेक्षा गरेको मेनुकाले डिथ्री अनलाइनलाई बताइन् । यता उनले भर्खरै अर्को एक चलचित्रमा समेत अभिनय गरेकी छन् । जुन चलचित्रमा उनी प्रमुख र एकमात्र अभिनेत्रीको रुपमा छिन् । बिएस बलामीको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘प्रपन्च’को छायांकन समेत लगभग सकिएको छ । हेर्नुस् मेनुका र प्रपन्च टिमसंग छायांकन स्थलमै गरिएको रमाईलो कुराकानी ।
केही दिनअघि मोरङको गोकर्ण रिसोर्टमा एक गीतको छायांकन भएको थियो । जहाँ उनी चलचित्रका अभिनेता मध्येका एक मनिल तामाङसंग कोरोयोग्राफर तेन्जु योन्जनको एक्सन कटमा रोमान्टिक सिन दिइरहेकी थिइन् । कुराकानिका क्रममा मेनुकाले प्रस्तोतालाइ नै हिरोनी फिलिङ्समा थियो कि थिएन ? भनेर प्रश्न गरेपछि माहौल रमाइलो बनेको थियो । चलचित्रमा मेनुकाको एक्सन अवतार पनि देख्न सकिने छ । धेरै नै मेहनत गरेको कारण यो चलचित्रले आफ्नो अभिनेत्रीमा जम्ने सपनामा एउटा दरिलो ईट्टा थपिने माझीले बताइन् ।
चलचित्रमा माझीसंगै सुमन थापा, सिद्धार्थ शिह, ध्रुब कोइराला, पीयूष मगर र मनिल तामाङ लगायतको अभिनय रहेको छ । बिएस बलामिको निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा बद्री शाह, अनिल गुप्ता र रवि राज आचार्यको लगानी रहेको छ । श्याम धिताल कार्यकारी निर्माता हुन् भने पारस कुवरले चलचित्रको कथा तयार गरेका छन् । दिवस गुरुङले छायांकन गरेको चलचित्रलाई आउदो माघको अन्तिम वा फागुनको सुरुवातमा देशभर रिलिज गर्ने तयारी रहेको निर्देशक बलामिले जानकारी गराए ।